अबको ३ वर्षसम्म चम्किछन् यी ४ राशिहरुको भाग्य, कतै तपाईको राशी त परेन ? (पुरा पढ्नुहोस्) – Fewa Times
अबको ३ वर्षसम्म चम्किछन् यी ४ राशिहरुको भाग्य, कतै तपाईको राशी त परेन ? (पुरा पढ्नुहोस्)
प्रकाशित मिति: October 7, 2018 2:34 pm
काठमाडौँ – सुर्यले राशी परिवर्तन गर्दा कुनै राशिलाई राम्रो फाइदा हुने गर्छ भने कुनै राशिलाई बेफाइदा हुने हुन्छ। कुनै राशिलाई लाभ हुँदा छोटो समय सम्म मात्रै लाभ हुने हुन्छ भने कुनै राशिलाई लामो समय सम्म पनि लाभ कायम रहने हुन्छ।
यी ४ राशीहरु सिंह, कन्या, तुला र कुम्भ रहेका छन्। आजको रातको १२ बजे देखि ३ वर्ष सम्म यी ४ राशीहरुलाई राम्रो समय रहने ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ।
स्वास्थ्यको मामिलामा पनि यी ४ राशी हुनेहरुको लागि सुर्यको राशी परिवर्तन शुभ हुनेवाला रहेको छ। स्वास्थ्यमा भएको सम्पूर्ण विकार हटेर जाने देखिन्छ। अध्ययनमा सफलता हासिल गर्नको लागि खासै दुख गर्नु नपर्ने देखिने भएता पनि शिक्षाको क्षेत्रमा सानो–तिनो पनि लापरवाहीले दुख निम्त्याउन सक्छ।
जीवनमा भएका विभिन्न समस्या हाल भएर जान सक्ला। केहि समय देखि हल नभएको आर्थिक समस्या समेत हाल हुने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ। यी राशी हुने व्यक्तिहरुको नबनेको कार्य समेत फत्ते हुने देखिन्छ।
यी ४ राशी हुनेहरुको लागि सुर्य राशी परिवर्तनले पारिवारिक शुख समेत दिलाउन सक्ने देखिन्छ। आर्थिक मामलामा थोरै मात्र संयमता राख्नु भएमा पनि राम्रै लाभ मिल्न सक्ला।